Makuhlinzekwe ngezimpahla zabesifazane zangasese kubafundi - amandla.mobi
Makuhlinzekwe ngezimpahla zabesifazane zangasese kubafundi
“Ngisebenzisa isokisi njenge-pad” 
Bodade, iningi lethu liphoqeleke ukuthi siphuthe esikoleni uma sisesikhathini ngenxa yokubiza kakhulu kwama-pads. Eminyakeni emi-5 edlule, uMongameli Zuma wathembisa ama-pads amahhala kwimiphakathi entulayo , kodwa namanje sisalindile.
Kodwa singakushintsha lokhu, abantu besifazane abamnyama ibona abaningi eMzansi, futhi uma sibambisana, singaqikelela ukuthi iMnyango yezeMpilo, eZokothuthukisa uMphakathi, kanye neyeMfundo yeSisekelo ifeza izithembiso ezenziwa uMongameli Zuma.
Ngesilinganiso, amantomvazane abenza umatikutletsheni ngo2015 aphuthe izinsuku ezingama-300 , yingakho abantu besifazane baseMzansi besengcupheni yokungaqashwa futhi bahlupheke.
Sekwanele, sibambisene, singaqikelela ukuthi ngokuqala kwekota yesi-4 ka2016, akukho ntombazane ezithola ingaphansi kwesimo sokuthi iphutha isikole ngenxa yokuthi kufanele isebenzise isokisi noma iphephandaba uma isisikhathini.
BoNgqongqoshe Angie Motshekga, Aaron Motsoaledi kanye noBathabile Dlamini,
Thina, amadodakazi aseMzansi, sicela kini ukuthi niqalise nifeze isithembiso esenziwa uMongameli Zuma ngo2011 lapho athembisa khona ama-pads amahhala kulabo bethu abangakwazi ukuwathenga ngenxa yobubha. Impilo, imfundo, ukuqashwa kwethu, kanye nesithunzi sethu kusezandleni zenu. Sicela kini ukuthi mhla kuqala izikole ngekota yesi-4 ka2016 ngo-Okthoba 10, kungabi khona ntombazane engakwazi ukufinyelela kuma-pads amahhala, kungabi khona ntombazane ephutha isikole ngenxa yokuswela ama-pads, noma esasebenzisa amasokisi noma amaphephandaba.
Thina, amadodakazi aseMzansi, sicela kini ukuthi niqalise nifeze isithembiso esenziwa uMongameli Zuma ngo2011 lapho athembisa khona ama-pads amahhala kulabo bethu abangakwazi ukuwathenga ngenxa yobubha.